Ezona zixeko zibalaseleyo zaseSpain zokundwendwela ngemoto entwasahlobo | Iindaba Zokuhamba
Iindaba Zokuhamba | | Iindawo zokutyelela
Thatha ithuba lokuba ingqele iyanyamalala kancinci kwaye amaqondo obushushu aya esiba shushu ngokundwendwela enye izixeko ezi-6 ezilungileyo eSpain ukuchitha iholide emnandi kule ntwasahlobo.
KUNYE… Yintoni ebhetele kunokuhamba nemoto yethu? Sidibanisa imivalo yophahla kwisithuthi sethu kunye nokuzonwabisa! Ngaba ukulungele ukufumana izixeko eziphambili ngeli xesha lonyaka? Qhubeka ufunda!
3 UAlicante, uBenidorm
5 ICórdoba kunye neepatiyo zayo ngoMeyi
Ewe kunjalo. IMadrid sisixeko esinomtsalane. Kungabanda kakhulu ebusika ukuba uvela kwisixeko eshushu, kwaye kunokuba shushu ehlotyeni ukuba uvela kwisixeko esibandayo. Nangona kunjalo, izalwa ngokutsha kwaye idubula entwasahlobo. Ilanga, esele lifudumele, liyamema uhamba ngokuzolileyo kwizitrato zawo ezintle kunye neepaki ezinamagqabi.
Ngentwasahlobo, ungahamba nge Ipaki elungileyo yomhlala phantsi (ukuqasha isikhephe echibini), thatha ibhayisekile ngeParque Juan Carlos I okanye iMadrid Río. Kwaye ukuba awuziva ngathi uhamba, sicebisa ukuba ubhukishe ukhenketho lwedolophu kwibhasi yabakhenkethi evulekileyo ukuze usebenzise imeko yemozulu elungileyo okanye ulandele indlela emotweni yakho: Olona khetho lusongayo kwaye lukhululekile!
Kwaye kutheni kungenjalo khwela kwimoto yekhebula kwaye uyayithanda ikomkhulu laseSpain elivela phezulu, ngelixa uhlamba kwimitha yokuqala yelanga lasehlotyeni?
Ukuba akushushu kakhulu ngaphandle, ungahlala uhlala Ndwendwela iRoyal Palace kunye neAlmudena Cathedral.
Iindidi zejografi zaseSpain zenza kube nzima ukugqiba ukuba yeyiphi eyona ndawo ifanelekileyo.
Nangona kunjalo, sikhetha iipyrenees kuba entwasahlobo kusekho ikhephu kweyona ncopho iphakamileyo, oluhlaza uyakhazimla ezintlanjeni kwaye amanzi ayampompoza macala onke, avumela imilambo ukuba iqukuqele ngamandla. Akukho hlobo lwecebo lokucoca ulwelo luyimfuneko kuba amasimi atshisa iintyatyambo zasendle, ilanga liyavela kwaye isibhakabhaka siluhlaza ngokwenyani. Iintsuku ziyandiswa, kwaye yonke into iyahlangana ukwenza imeko emnandi kakhulu.
Sikonwabele ne- iidolophana ezincinci ezinezindlu zamatye, isileyiti kwiithayile zalo nakwiimbiza zeentyatyambo ezifestileni, kwanezitrato ezinamagophe amaninzi nethrafikhi encinci.
Intwasahlobo lelona xesha lilungileyo lokundwendwela iBenidorm. Nangona abaninzi besithi ngenye indlela, inyaniso kukuba ingaphezulu kwelanga kunye nolwandle.
IBenidorm inedolophu endala yabantu abahamba ngeenyawo, ineebhari ezininzi Bakhonza itapas kulo lonke elaseSpain kunye nomoya omkhulu kumathambeka. Ukongeza kwindawo ye tapas, iBenidorm ineendawo ezahlukeneyo zokutyela ezisebenzayo Ikhitshi lamanye amazwe phantse kuzo zonke iimbombo zehlabathi.
Unako kwakhona ukuya kwi-Mirador de Benidorm, engomnye weempawu zesixeko kwaye idibanisa iilwandle ezimbini. Ukusuka kolu luvo ungonwabela umbono onomtsalane wokutshona nokutshona kwelanga.
IValencia iyasamkela ngemozulu enelanga, imihlaba elinde ukugcwaliswa kunye neeparaleas ezilungileyo ezinokubonelelwa yiSpain, ezisandula kulungiswa kwiitafile zangaphandle. Abayi kubakho abantu abaninzi ehlotyeni, ke Siza kuba nolwandle ukuze sikwazi ukuhamba ngaselunxwemeni kwaye mhlawumbi sitye ice cream.
Singaya kwi Isixeko soBugcisa, jikeleza edolophini, uye ku Igadi yezityalo… Kwaye okuninzi!
ICórdoba kunye neepatiyo zayo ngoMeyi
ICórdoba yindawo ekumele ukuba uyibone eSpain ngoMeyi, kunye neminqamlezo yayo kaMeyi kunye neepatios, iingcango kunye nemithi yeorenji eqhakazayo. Xa kuthelekiswa nayiphi na enye inyanga yonyaka, isixeko sihlanjwe ngokukhanya kunye nombala. Ukongeza, kule nyanga kukhuphiswano oludumileyo lweMaystick, kwaye izindlu zabucala ezininzi zivula iipatios zabo kuluntu, zigcwele iintyatyambo, iinkcukacha kunye nokuqwalaselwa ngononophelo kuwo wonke umntu odlulayo.
I-Mosque-Cathedral eyaziwayo emhlabeni uya kukushiya ungathethi, kwaye utyhutyhe kwikota yamaJuda, ungcamle iitapas kwiindawo zentselo kwaye ufumane ezinye zeempawu ezifihlakeleyo zesixeko, ezinjengeNdlu yaseViana kunye neeAlcazar Gardens, lulonwabo lokwenene. Isixeko esibuyele umva kunye neenkulungwane zembali kunye nomxube wezenkcubeko ezahlukeneyo ongayi kukuyekela.
Sevilla yindawo entle ngeli xesha lonyaka ngo-Epreli Fair, ongomnye wemiboniso yeAndalusian eqhubeka de kube sentwasahlobo. Abakhenkethi abaninzi bakhetha ikomkhulu laseAndalusi ngenxa yokubaleka kwabo entwasahlobo ngeentyatyambo ezihombisa izitrato zayo, i umoya weholide wabantu bayo kunye nobuhle bommandla.
Ukutyelela Iflamenco ibonisa eSeville Ngomnye wemisebenzi ebalulekileyo, kunye nokuhamba kwizikhumbuzo, ukuthatha uhambo lokuhamba ngenqwelomoya kunye nokungcamla ukutya kwasekuhlaleni. Kwiintsuku ezimbalwa uya kuba nakho ukwazi yonke into malunga nomzi. Uhambo lweempelaveki oluya eSeville entwasahlobo luyakwenza ukuba uthandane nesixeko kwaye luya kukwenza ufune ukubuya nangaliphi na ixesha lonyaka.
Ngoku uyazi ukuba zeziphi izixeko zaseSpain ekufuneka uzindwendwele. Uza kuluqala ngaphi uhambo lwakho? Khumbula ukuba kuya kufuneka uvumelane nemithetho ebekwe yimeko kaxakeka ka-Covid-19. Fumanisa malunga nemithetho yoluntu ngalunye kwaye wonwabele uhambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo zokutyelela » Ezona zixeko zibalaseleyo zaseSpain zokundwendwela ngemoto entwasahlobo